Akụkọ - Kedu ihe m kwesịrị ịṅa ntị na mgbe ị na-enyocha tankị nchekwa mmiri cryogenic?
A na-ekewa nyocha nchekwa nchekwa mmiri Cryogenic na nyocha nke mpụga, nyocha nke ime na nyocha ọtụtụ akụkụ.A ga-ekpebi oge nyocha nke tankị nchekwa cryogenic dị ka ọnọdụ teknụzụ nke ojiji nke tankị nchekwa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nyocha nke mpụga bụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ, nyocha nke ime bụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ 3, na nyocha nke ọtụtụ akụkụ bụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa afọ 6.Ọ bụrụ na tankị nchekwa ọkụ dị ala nwere ndụ ọrụ karịa afọ 15, a ga-eme nyocha nke ime na mpụga kwa afọ abụọ.Ọ bụrụ na ndụ ọrụ bụ afọ 20, a ga-eme nyocha nke ime na nke mpụga ma ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa afọ.
1. Nyocha nke ime
1).Ma e nwere corrosive yi n'elu n'ime na manhole njikọ tank tank, na ma e nwere cracks na ịgbado ọkụ onuete, mgbanwe ebe nke isi ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ ebe nrụgide na-lekwasị;
2).Mgbe enwere corrosion n'ime ime na elu nke tank ahụ, a ga-eme ọtụtụ nha mgbidi na akụkụ ndị a na-enyo enyo.Ọ bụrụ na ọkpụkpụ a tụrụ atụ dị ntakịrị karịa nke e mere obere mgbidi mgbidi, a ga-enyocha nkwenye ike ahụ, na aro ma ọ ga-anọgide na-eji ya na ikike arụ ọrụ dị elu nke na-ekwe ka a ga-etinye n'ihu;
3).Mgbe mgbidi dị n'ime tank ahụ nwere ntụpọ dị ka decarburization, nrụrụ nrụgide, corrosion intergranular na ike ọgwụgwụ, a ga-eme nyocha metallographic na nha siri ike elu, a ga-edozikwa akụkọ nyocha.
2. Nnyocha nke mpụga
1).Lelee ma oyi akwa mgbochi corrosion, mkpuchi mkpuchi na mpempe aha akụrụngwa nke tank nchekwa ahụ adịghị, yana ma ngwa nchekwa na ngwaọrụ njikwa ezuola, nke nwere mmetụta na ntụkwasị obi;
2).Ma enwere mgbawa, nrụrụ, oke ọkụ mpaghara, wdg n'elu elu;
3).Ma ihe nkedo ịgbado ọkụ nke ọkpọkọ njikọ na ihe nrụgide na-agbapụta, ma ihe mgbochi ahụ adịghị, ma ntọala ahụ na-emikpu, na-atụgharị ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ na-adịghị mma.
3, Nyocha zuru oke
1).Mee nyocha nke na-adịghị emebi emebi na weld isi ma ọ bụ shei, na ogologo nlele ntụpọ ga-abụ 20% nke ngụkọta ogologo nke weld;
2).Mgbe ị gafechara nyocha nke ime na mpụga, mee nyocha nke hydraulic na 1.25 ugboro nrụgide nhazi nke nchekwa nchekwa na ule ikuku na nrụgide nhazi nke nchekwa nchekwa.N'ime usoro nyocha nke dị n'elu, tank nchekwa na welds nke akụkụ niile enweghị nkwụsị, na nchekwa nchekwa enweghị nrụrụ na-adịghị ahụ anya dị ka onye ruru eru;
Mgbe emechara nyocha nke tankị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, a ga-ede akụkọ na nyocha nke tankị nchekwa ahụ, na-egosi nsogbu na ihe kpatara ya nwere ike iji ma ọ bụ mee ihe ma ọ dị mkpa ka edozi ya ma ghara iji ya.Ekwesịrị idowe akụkọ nyocha ahụ na faịlụ maka ndozi na nyocha n'ọdịnihu.
Oge nzipu: Dec-27-2021